Semalt: Ntuziaka SEO
Dị ka anyị maara, ụzọ kachasị dị irè maka mgbasa ozi bụ ịkwalite ngwaahịa na ọrụ site na ịntanetị. Taa, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ụlọ ọrụ na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa, n'ihi na nke a bụ isi ihe a chọrọ. Mana inwe webụsaịtị anaghị ekwe nkwa inwe ihe ịga nke ọma n’enweghị nkwalite ya. Nkwalite mkpokọta weebụ bụ ọrụ siri ike, nke naanị ụlọ ọrụ SEO ọkachamara nwere ike mezuo. Atụla ntụkwasị obi na ntanetị gị n'aka ndị crooks na-enweghị ike idozi nsogbu nke ha. Nhazi SEO dị ka ọrụ nkwado nrụọrụ weebụ bụ nke Semalt nweere. N'ezie, Semalt abụghị naanị njikarịcha SEO kamakwa usoro dị iche iche maka mmụba kasịnụ.
Ndị nwe saịtị nwere ahụmịhe na-eji arụ ọrụ webụsaịtị ha n'onwe ha ma ọ bụ tụkwasakwa ndị na-egwu ihe na mpaghara a. N'ihi nke a, azụmaahịa ha lara n'iyi. Na ụdị ikpe ọ bụla, ndị mmadụ rịọrọ Semalt ka o chekwaa weebụsaịtị ha, anyị ajụghị. Anyị si na steepụ kpọpụta saịtị ha wee kwagide ha n'ọnọdụ dị elu nke igwe nchọta ahụ. Ọ ga-aka mma ka ị gụọ ikpe ndị a na weebụsaịtị anyị, gụnyere nzaghachi ziri ezi site na puku ndị ahịa. Semalt nwere ahụmịhe buru ibu na ọkachamara dị elu ma nwee ike ịnagide ọrụ nke mgbagwoju anya ọ bụla. Can nwere ike ịme nke ọma site na njikarịcha SEO, mana naanị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya Semalt.
Na-enweghị ụzụ teknụzụ SEO, ị gaghị enweta nsonaazụ achọrọ. Ka o sina dị, ihe ịga nke ọma adabereghị naanị na iji ụdị usoro ụfọdụ. Ọ dị mkpa ijigide oge ndị a ma melite atụmatụ njikarịcha. Semalt na-azụlite usoro ọhụụ mgbe niile iji kwado weebụsaịtị, na-etinye teknụzụ ohuru. Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo onwe ya dị ka onye ndu nke nkwalite SEO na nnukwu mmadụ n'ụwa niile na mmepe mmepe weebụ.
Ndị otu Semalt mejupụtara ndị ọkachamara na klaasị ụwa niile na ọrụ ọpụrụiche ha. Ọkachamara ọ bụla nwere ike ikwu ọtụtụ asụsụ ma nwee ọtụtụ ahụmịhe na njikarịcha SEO. Ndị a bụ ndị njikwa nwere ahụ ọfụma, ndị ọkachamara SEO ruru eru, ndị ọkachamara IT, yana otu ndị na - ede akwụkwọ. Na mgbakwunye, ndị na-ese ihe dị elu na-arụkwa ọrụ na otu ahụ. Tupu ịhọrọ usoro azịza, ndị ọkachamara na-eburu n'uche ihe niile na-emetụta arụmọrụ nke nkwalite weebụ. Saịtị ọ bụla bụ oru ohuru nke choro uzo mmadu na usoro njikarịcha ya.
Nkwalite SEO nke saịtị dị na ngwa nchọta dị mma maka ọtụtụ azụmaahịa na-enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha site na Internetntanetị. Nke a bụ ụzọ dị mma iji gbanye mkpọrọgwụ n'ime inyocha ogologo oge ma na-amụba ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa. Search Ngini Nchọpụta (SEO), na okwu dị mfe, bụ usoro nke njikarịcha n'ime na mpụga iji bulie ọnọdụ weebụsaịtị dị na inyocha ọchụchọ ahụ. Yabụ iji wee nwee ike debe ebe nrụọrụ weebụ nke ọma site na ngwa nchọta, ọ dị mkpa ka etinyere ya na usoro siri ike.
Inwe webụsaịtị apụtaghị n’amaghị na ịkwalite ya. Enweghị njikarịcha, okporo ụzọ akụrụngwa ga-adị obere ma ọ bụ efu ma ọ bụrụ na ọ gaghị eji ụzọ ndị ọzọ nke na-adọta okporo ụzọ. SEO dị mma maka onye ọ bụla na-aga ire ngwaahịa na Internetntanetị, na-achọ ndị ahịa, ndị mmekọ, wdg. Nchọpụta ọchụchọ na nkwalite nke weebụsaịtị na-agbanwe mgbe niile. Ọnọdụ algorithms na-akawanye mma, ọrụ nyocha ndị ọhụrụ na-apụta yana nsuso nke nsonaazụ arụ ọrụ arụpụtara na-ewere ọnọdụ. Semalt na-enyere aka dị ukwuu na mmepe nke sistemụ njikarịcha SEO.
Nkwalite SEO nke weebụsaịtị dị na ngwa nchọta gụnyere mpaghara isi atọ: mpụga, njikarịcha n'ime, na inweta nyocha. Usoro nke ọ bụla nwere ọrụ dị iche iche achọrọ ịrụ n’otu usoro. N'ihi afọ iri nke ahụmịhe iji melite mkpokọta mkpokọta weebụ, Semalt na-enye ngwọta dị mgbagwoju anya dị ka AutoSEO, FullSEO, yana nchịkọta nyocha weebụsaịtị pụrụ iche. Campaignsgba mgba ndị a na-ekwe nkwa ịrịgo ngwa ngwa n'ọkwa ọkwa dị elu na igwe nchọta. Lezie anya na nke ọ bụla n’ime ha.
Mgbasa ozi AutoSEO
Imirikiti ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere obi ike na AutoSEO bụ ezigbo azịza ịkwaga ebe nrụọrụ weebụ gaa n'ọkwá dị elu na igwe ọchụchọ. Ọ bụghị na mberede, ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ jisiri ike nwee ihe ịga nke ọma site na mkpọsa a amụbawo ngwa ngwa. AutoSEO gụnyere ọtụtụ nke iwu mmado nke ana - eme na mkparịta ụka mgbe niile na onye ọkachamara Semalt. Ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa ibu ọrụ maka nsonaazụ na-aga nke ọma. N'ime usoro a, a ga-agbanwe nhazi nke weebụsaịtị dịka atụmatụ njikarịcha. O doro anya na nkwalite n’ime inyocha nchọta ga-aga nke ọma. Ndị a bụ ọrụ aga-eme edobere maka AutoSEO:
Mgbasa ozi nke AutoSEO na-amalite ozugbo ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị. Nchịkọta weebụsaịtị na-amalite, n'oge na-adịghị anya, ị ga-enweta nkwupụta mbụ banyere ọnọdụ saịtị gị na igwe nchọta. Ọtụtụ mgbe, enwere ike ihie ụzọ na ntanetị weebụ, yabụ, injinia SEO anyị na-enyocha akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị. Ozugbo achọpụtara njehie ndị ahụ, ị ga-enweta akụkọ zuru ezu, na injinia SEO ga-ewepụ ha. O yikarịrị ka ị nweghị akụkụ nke usoro ahụ, mana oge niile na-achọpụta ihe niile na-eme. Mgbe emezigharị njehie niile, a ga-ahọrọ mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị. Oge a bu n'uche iji kwalite okporo ụzọ weebụsaịtị.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ nhọrọ nke njikọ ịntanetị. Etubere njikọ ndị a iji tinyekwuo n'ọrụ na ntanetị. Maka na injin na-acho na-agọnarị ọdịnaya enweghị isi, ọ dị mkpa idobe ya na ihe bara uru. Ọrụ ndị ọkachamara Semalt bụ ịhọrọ akụrụngwa ndị dị mkpa iji tinye njikọ. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ ihe omume nke ọkachamara ahụ, yabụ na ọ nweghị ihe na-emebi ebe nrụọrụ weebụ gị ga-eme. Ebe nrụọrụ weebụ gị dị nke ọma.
Ugbu a, anyị kwesịrị ime mgbanwe ndị achọrọ na weebụsaịtị. Onye njikwa Semalt na-arụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka mpụga ma na-atụ aro na nhazi teknụzụ. Akuko ozo gosiputara ihe mgbanwe aghaghi ime ka eweputa ihe oma. Ndị ọkachamara na-eji nnweta FTP (Njikwa Nyefee Protocol). Ọ dị mkpa ịnweta nnweta FTP maka nzaghachi ngwa ngwa na igwe njin nchọta iji mee mgbanwe dị mkpa. Dika a na-emelite ogo mgbe nile, Semalt na-agwa gị banyere ya ma na-ewebata isi okwu. Igodo ya aghaghi ikwekorita ihe di n’ime ya, ndi okacha amara na-achịkwa ya. Ihe ị ga - eme bụ ileru ma dekọọ nsonaazụ ọma a. Ọnụahịa kwa ọnwa maka AutoSEO na-agba ọsọ bụ $ 99.
Kedu ka FullSEO si arụ ọrụ
Semalt na-enye mgbasa ozi FullSEO, nke na-ekwe nkwa mmelite nke ọma na websaịtị na obere oge. Mgbasa ozi ahụ gụnyere njikarịcha nrụọrụ weebụ na mpụga. Usoro ahụ dum nwere ọtụtụ usoro mmado. Na njedebe nke usoro abụọ ahụ, ọkwa ahụ ga-adị elu nke ukwuu. Dị ka mkpọsa Semalt ọ bụla, a na-agba FullSEO n'okpuru nlekọta nke onye njikwa, ọ bụ ọkachamara na-eme ihe niile. N'oge na-adịghị anya, ị ga-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ gị na-abịaru nso na ọkwa ọkwa ọchụchọ kachasị elu ngwa ngwa. Okwesiri iburu n’uche na ndi osompi i nweghi ike ichota onodu webusaiti gi.
Iji malite mkpọsa ahụ, ịkwesịrị ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị. Ozugbo ị debanyere aha, ebe nrụọrụ weebụ gị ga-amalite nyocha. Omume niile emere n'oge a ga-akọwa njikarịcha n'ime. Ọ gụnyere ọtụtụ omume na ịlele ihe owuwu weebụsaịtị. Ga-enweta nkwupụta yana nsonaazụ nyocha ahụ yana ndepụta nke njehie dị na nhazi saịtị ahụ. A ga-emezi mmejọ niile site n'aka onye ọkachamara SEO, yabụ ịkwesighi ime ihe ọ bụla. Na-esote, onye ọkachamara SEO dabere na data sitere na akụkọ ahụ na-akọwapụta usoro ọmụmụ. Na njikarịcha n'ime, nhọrọ isiokwu metụtara isiokwu gị yana nkesa ha n'etiti ibe ibe dị ezigbo mkpa. Naanị isiokwu ndị ziri ezi nwere ike ịkwalite okporo ụzọ weebụsaịtị. Accessnweta na FTP na-enyere ọkachamara aka ịme mgbanwe ndị dị mkpa na weebụsaịtị.
Ihe na-esote bụ njikarịcha nke mpụga. Ọ pụtara ịrụ ọrụ na njikọ chiri azụ na iji ha mejupụta akụ na ụba. Anyị ga-aghota ụdị njikọ kachasị arụ ọrụ maka ngwa nchọta. Nke a bụ ọrụ nke ndị ọkachamara anyị. Ha na-ejikwa nlezianya nyochaa ọdịnaya. O kwesiri inwe nkwekorita ya n’uzu uzo esi abanye n’ime ya. Enwere ike ịtụle isi a dị ka ihe kachasị mkpa.
Semalt na-arụ ọrụ na ọtụtụ saịtị ndị a pụrụ ịdabere na ya, yabụ agaghị enwe nsogbu n'oge a. Ndị ọkachamara ahụ ga-ahọrọ ọdịnaya ndị nwere ọdịnaya kachasị mkpa dabere na ihe SEO chọrọ. Ozugbo ịbanyela na njikọ nke weebụsaịtị ndị ahụ, ị nwere ike ịtụ anya nkwalite ọma. Oge a na-akọ na-eme ka ị mata banyere mgbanwe dị na saịtị ahụ na mmụba ọkwa gị. Are na-etinye aka na mkpọsa ahụ dị ka onye na-ekiri ya, ma nwee ohere ịnweta ozi ọ bụla. Ndi okacha mara na-eso gi mgbe niile.
Ọ bụrụ na a na-amanye gị igbochi nkwalite SEO, ọ gaghị eweta ọtụtụ nsogbu. Agbanyeghị na Google wepụrụ backlinks na ebe a na-edebe data n'ime otu ọnwa, ọkwa agaghị ada ala. Ọnọdụ ọkwa ahụ ga-adịgide na ọkwa ụfọdụ, maka mgbasa ozi FullSEO. Ọkwa ga-adị elu karịa ka ọ dị tupu mkpọsa ahụ. Pricgwọ ọnụahịa FullSEO dabere na ọtụtụ ihe, ọkachasị metụtara steeti weebụsaịtị gị. A ga-ahọpụta ọnụahịa ikpeazụ mgbe nyocha nke weebụsaịtị site n'aka ọkachamara na SEO na nkwubi okwu ya. Costsgwọ ahụ ekwesịghị imenye gị ụjọ nke ukwuu n'ihi na ego ị na-enweta na-adị elu mgbe niile karịa ego a na-akwụ na Semalt.
N'agbanyeghi mgbanwe di iche na - eme n'ime igwe ọchụchọ, o dikariri ike ịlụso usoro njikọ njikọ. O siri ike ịchọpụta isi ihe na - akwụ ụgwọ nke mmadụ nwere ike hụ na ọganihu akụ ahụ bara ụba. Techniqueszọ ochie agbaghịzi mkpa ọ dị, usoro ụzọ nkwalite ọhụụ ka na-edozighi. Na-enweghị nyocha ebumnuche, ọ gaghị ekwe omume ị nweta nsonaazụ nkwado. Ọ bụ n'ihi nke a ka Semalt mepụtara usoro nyocha ihe pụrụ iche nke nyochare iji chọpụta njehie ọrụ nke weebụsaịtị wee mezie ha. Isi ọrụ maka nchịkọta ahụ bụ:
Nchịkọta na-achọpụta njehie enwere ike na njikarịcha saịtị ma gosipụta nke a ozugbo. Mana ọ bụghị naanị ebumnuche. Usoro ahụ jiri nlezianya nyochaa ọdịnaya nke weebụsaịtị yana parameters ọrụ. Ọ na-enyocha weebụsaịtị ndị asọmpi, na-enyocha ike asọmpi ha. Iji malite nchịkọta gbasara nyocha, ịkwesịrị ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị. Akụkọ na-esote gosipụtara ọnọdụ nke weebụsaịtị gị na igwe nchọta yana ọnọdụ nke ndị asọmpi gị. N'iji ozi enwetara site na akụkọ ndị ahụ, ndị ọkachamara anyị na-eme mgbanwe ndị a chọrọ site na-eburu n'uche usoro SEO.
Inwe ezigbo akaụntụ na-enye gị ụfọdụ uru. Nwere ike itinye ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị nke ndị ọzọ na ntuli aka nke gị. Weebụsaịtị ndị ị tinyego na-amalite nyocha ozugbo na ị na-enweta mkpesa ya na data zuru ezu. Ngwa enyocha ahụ na-emelite algọridim ha mgbe niile, yabụ na ndị nyocha anyị na-enwe ike ịme mgbanwe ziri ezi na weebụsaịtị. Nyocha zuru ezu na-eme ka o kwe omume ịmata isi okwu dị mma. Enweghị nchịkọta, ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ isi okwu kwesịrị ekwesị dabara na ọdịnaya nke weebụsaịtị. Site na nhọrọ, n’ezie, ịnwere ike ịgbakwunye mkpụrụokwu dị iche iche ma ọ bụ hichapụ nke na-enweghị isi. Isi okwu bu, itinye isi okwu nke achoro abanyela. Usoro a ga - enweriri ike ịbawanye ngwa ngwa nke okporo ụzọ.
A na-anakọta data gbasara elekere. Ihe itinye aka gị bụ ịnata akụkọ banyere arụmọrụ yana idozi nsonaazụ ọma. Can nwere ike ijide n'aka na omume ndị ahụ ziri ezi site na injin nchọta. Nsonaazụ ahụ na-ama jijiji: ị na-ahụ n'ezie ọkwa dị elu nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọzọkwa, ndị na-asọmpi gị enweghịzị ike iji aka gị. Anyị na-akwado iji Programming Application Interface, nke na-emekọrịta data niile na akpaghị aka. Site na itinyeghị mbọ ọ bụla, ị na-echekwa mmelite ugbu a. Ọrụ nchịkọta gụnyere nnukwu nchịkọta atọ nwere ọnụ ahịa dị iche:
Semalt na-enyekwa ngwọta zuru oke maka mmepe weebụ. Ndị ọkachamara anyị na-echepụta weebụsaịtị azụmahịa dị ka nkọwa nke ndị na-ege ntị na ebumnuche nke ebumnuche si dị, zụlite usoro pụrụ iche, ọrụ mmemme. Anyị na-etinye ngwa websaịtị yana ngwa ndị ọzọ na Sistem Nchịkwa ọdịnaya, hazie modulu e-commerce na API.
Mmepụta vidiyo nkwado
Azụmaahịa ọ bụla bu n’obi iresị ndị ahịa bịara ire ya ma ọ bụ ọrụ ya. Ahịa ahụ buru ibu nke na ọ dị mfe furu efu n'etiti ndị asọmpi ma ọ bụrụ na ị gwaghị ndị zụrụ ahịa na ndị ahịa gị nwere ike ịnweta onyinye gị. Mgbasa ozi nwere ike ịdị iche, mana Ad vidiyo a na-ewere ka ọ kacha arụ ọrụ. Ọ nwere ike imetụta mmetụta karịa ụdị ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere Semalt na-eweta ọrụ pụrụ iche maka ịmepụta vidiyo pụrụ iche. Ọ ga-egosipụta uru niile dị na ụlọ ọrụ gị, ọ ga-ewetakwa ọtụtụ okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Template nwere ike ịhọrọ usoro vidiyo site na ndebiri ma ọ bụ nye iwu ka nhọrọ gị dị. Vidiyo nkwado site na Semalt ga-adọta ọtụtụ ndị ahịa ma mee ka azụmahịa gị nwee ọganihu.
Na-achịkọta nyocha nke ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike inye ndụmọdụ ka ịghara iche ogologo oge banyere ebe ị ga-aga maka nkwalite mkpokọta weebụ na-aga nke ọma. Azịza ya karịrị ihe doro anya. Anyị na-etinye ụdaolu n'ụzọ dịtụ iche. Semalt na-eme karịa ịkwalite weebụsaịtị, ọ na-eme ka ndị mmadụ baa ọgaranya site na njikarịcha SEO. Ihe ịga nke ọma gị bụ aha anyị. Kpọtụrụ anyị, anyị dị njikere iburu ọrụ maka ụba gị.